တရုတ်နိုင်ငံသည်စက်ရုံနှင့် HY1005A-085 စက်ရုပ်နှင့်တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်သည့်တံဆိပ်တုံး Yunhua
YOO HEART တံဆိပ်တုံးစက်ရုပ်သည်ထုတ်လုပ်သူများတံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်ထုတ်လုပ်သည်။ ဤကုမ္ပဏီသည် ၀ န်ထမ်းများ၏လုံခြုံမှု၊ ကျွမ်းကျင်မှုကွာဟမှုနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဖိအားပေးမှုတို့အတွက်ကုမ္ပဏီကစိုးရိမ်သည်။
HY1005A-085 သည်လူတစ် ဦး တည်းရွေ့လျားနိုင်သောကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည့်တံဆိပ်ရိုက်စက်ရုပ်ဖြစ်သည်။
6 5KG ± 0.03 1.6kva 0-45 ℃စိုထိုင်းဆမရှိပါ ၆၀ ကီလိုဂရမ် မြေပြင်၊ နံရံ၊ မျက်နှာကျက် IP65
Q1 ။ လျှောက်ထားလိုသောဗီဒီယိုများကိုပြသနိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ ဒါကိုလုပ်ဖို့နည်းလမ်း ၂ ခုရှိတယ်။ ၁ ။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီဗီဒီယိုတွေတောင်းခံနိုင်တယ်။ ၂ ။
Q2 ။ ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်4axis စက်ရုပ်ကိုအသုံးပြုသင့်သလား။
A. အတိအကျမဟုတ်ပါ၊ အကယ်၍ လျှောက်လွှာသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ပါက၊ အကယ်၍ လျှောက်လွှာသည်ရိုးရှင်းပါက၊ ၄ လုံး ၀ စက်ရုပ်သည်ကောင်းမွန်သည်။ အကယ်၍ လျှောက်လွှာသည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးပါကသင်သည်စက်ဝိုင်း ၆ စက်ကိုသုံးနိုင်သည်။
Q3 ။ Stamping လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်မော်ဒယ်မည်မျှရှိသနည်း
A၊ ကျွန်တော်တို့မှာမော်ဒယ်များရှိတယ် - ၀၈၅,၀၉၈,၁၄၁,၁၁၀,၁၀,၂၀၀၊ ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် ၃ ကီလိုမှ ၁၆၅ ကီလိုဂရမ်အထိသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။
Q4 ။ အသေးငယ်ဆုံးမော်ဒယ်ကဘာလဲ
A, သင်စက်ရုပ်လုပ်ဆောင်မှုကိုသာစမ်းသပ်လိုပါက၊ ၅ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိပြီး ၈၅၀mm ရှိသော HY1005A-085 ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
Q5 ။ စက်ရုပ်နှင့်ပုံနှိပ်စက်ကိုမည်သို့ချိတ်ဆက်နိုင်မည်နည်း။
A. ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုပ်သည် I / O port မှတဆင့် signal များကိုမျှဝေနိုင်သည်။ သင်၏ပုံနှိပ်စက်သည် signal ကိုလက်ခံရရှိပြီးပေးပို့နိုင်ပါက၎င်းသည် robot နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
နောက်တစ်ခု: စက်ရုပ် HY1003A-098 ပုံနှိပ်ခြင်း